Haween tababar caafimaad loogu xiray cisbitaalka guud ee Mudug. – Radio Daljir
Oktoobar 6, 2012 4:47 b 0
Gaalkacyo, Oct 06- Waxaa maanta cisbitaalka guud ee gobolka Mudug lagu soo gaba-gabeeyay tababar muddo labo toddobaada oga soconayay haween isaga kala yimid degmooyinka iyo tuulooyinka gobolka.
Tababarkan oo ku saabsanaa dareyeelka hooyada uurka leh illaa xiliga dhal-mada ayaa waxaa ka qayb galayay 15 haweena oo 5 ka mid ay ka yimaadeen gudaha Gaalkacyo 10ka kalana degmooyinka iyo tuulooyinka.
Munaasabad maanta lagu soo xirayay oo ka dhacday cisbitaalka guud ayaa waxaa muhiimada tababarkan iyo qaybihii ka faa’iidaystayba ka warbixiyay C/kaafi Maxamed Yuusuf oo ka mid ahaa macalimiintii tababarka bixinayay mudadii uu socday.
Sareedo Cilmi Warsame oo iyaduna ka mid ahayd haweenka ka faa’iidaystay ayaa sharaxaad ka bixisay sida ay ugu baahnaayeen barnaamij noocaan oo kalaa waxayna maamulka cisbitaalka ku boorisay in la tago deegaanada ka baxsan magaalada oo ay ka mid yihiin kuwa aan u dhawayn laamiga daryeel caafimaad iyo tababarana looga fuliyo.
Agaasimaha Cisbitaalka guud ee gobolka Mudug Dr Maxamed Xuseen Aaden oo tababarka xiray ayaa ballan qaad u sameeyay haweenka, wuxuuna sheegay inay ku dadaalayaan inay daryeel caafimaad oo la isku halayn kara ay helaan hooyada iyo dhallaanka inta karaankoodaa.
Ma ahan tababarkii ugu horeeyay oo kor loogu qaadayo wacyi galinta hooyada uurka leh illa dhalmada iyo dhallaanka ee lagu qabto cisbitaalka guud ee Mudug.